နေအိမ်» PCBA- ဘလော့ဂ်» PCB Assemblers: Printed Circuit Board Assembly Manufacturing
A printed circuit board or PCB isathink board used to interface electrical parts utilizing copper tracks rather than wires. Gaps bored on the board are being used to fix the electrical components in position. They are then welded to make sure about them in position, and the copper tracks interface them together, framingacircuit. The board and the parts collectively are known asaPCB ညီလာခံ. (or then again Printed Circuit Board Assembly)
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့fixedရိယာကိုပုံသေသတ်မှတ်ထားလို့ပဲ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာတွင်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သောအခြားဆက်သွယ်မှုချိတ်ဆက်မှုဝါယာကြိုးမူဘောင်များနှင့်နည်းစနစ်များနှင့်မတူညီပါကပုံနှိပ်တိုက်ဘုတ်များကိုအသုံးပြုရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များရှိသည်။ အသစ်သော PC board base ပစ္စည်းများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကို၎င်းတို့အားပေါ့ပေါ့တန်တန်တိုက်စားခြင်း၊ လျှပ်စစ်နှင့်ပူနွေးသောစီးကူးခြင်း၊ ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း၊ PC board များကိုတစ်ခုတည်းဖြစ်စေ၊ တစ်ခုတည်းဖြစ်စေဖြစ်စေဆိုလျှင်သင်ရွေးချယ်ထားသောထုတ်လုပ်သူများ၏ site တွင်အွန်လိုင်းတောင်းဆိုမှုကိုတင်ရုံဖြင့် online ထပ်မံရယူနိုင်သည်။